Raw Testosterone propionate Soo-saareyaasha budada & Alaab-qeybiyeyaasha - Warshadda
Tijaabinta Root Testone Dufanka u samee (57-85-2)
Testosterone Daawada budada ah waa mid ka mid ah noocyada testersone testosterone. Daawadani waa stomoid anabolic iyo sidoo kale waa mid ka mid ah kuwa ugu caansan ee dhismaha jirka. Hadafkeedu wuxuu yahay in la kordhiyo murqaha iyo xoogga. Taakuleynta Maskaxdu waa saldhig yar oo saliid ah oo ku salaysan saliid baaritaan ah ee testosterone. Baaritaanka kiniiniga Duufaanta waxay xakameysaa qanjirka 'gonadotropin' ee qanjirada 'pituitary gland' iyo ablates waxsoosaarka estrogen ee ugxan sidaha, taas oo hoos u dhigeysa heerarka estrogen ee endogen. Waxaa intaa dheer, wakiilkan wuxuu kor u qaadayaa dayactirka sifooyinka lab ah ee galmada waxaana loo calaamadeynayaa beddelka tijaabada baaritaanka ragga.
Baaritaanka Root Testone Daawada budada ah (57-85-2)
Tijaabinta Root Testosterone Propionate budada (57-85-2) Sharaxa
Baaritaanka Root Testone Foaming propionate waa shiid gaaban oo saliid ku saleysan oo ku salaysan baaritaan lagu sameeyo testosterone. Testosterone wuxuu joojiyaa dheecaanka gonadotropin ee qanjirka 'pituitary gland' iyo inuu soo saaro wax soo saarka estrogen ee ugxan sidaha, taas oo hoos u dhigeysa heerarka estrogen ee endogen. Waxaa intaa dheer, wakiilkan wuxuu kor u qaadayaa dayactirka sifooyinka lab ah ee galmada waxaana loo calaamadeynayaa beddelka tijaabada baaritaanka ragga.
Baaritaanka hiddaha "Powder Testoneone" Tusaale ahaan waxaa laga helaa shakhsiyaadka isticmaalay ama qaatay daroogada. Waa farsamoyin tijaabo ah oo tijaabo ah oo beddel ah oo lagu beddelayo booska 17-beta. Dhibaatooyinka testosterone ee dadka iyo xayawaanada kale waxay u dhacaan labo habab oo waaweyn: iyadoo loo adeegsanayo soo-qaadaha qufaca iyo tooska (DHT), iyo isbedelka estradiol iyo dhaq-dhaqaaqa qaar ka mid ah soo-saarka daawooyinka estrogen. Testosterone lacag la'aan ah (T) waxaa loo qaadaa cytoplasm unugyada unugyada unugyada, halkaas oo ay ku xiran karto qolka xajinta iyo orrogen, ama waxaa loo yareeyn karaa 5 & alpha; -hidhadototestosterone (DHT) by enzyme cytoplasmic 5 & alpha; isdhaafsiga. DHT-du waxay ku xidhan tahay weedhaha isku midka ah iyo xitaa ka xoog badan T, si ay awooddeeda asrogistu ku saabsan tahay 2. Waqtiyada 5 ee T. T-reseptor ama dhismaha DHT-receptor waxaa ku jira isbedel qaab-dhismeed kaas oo u oggolaanaya inuu u wareego nukleus unug oo si toos ah ugu xiro taxanaha nucleotide gaar ahaan DNA-da chromosomal. Meelaha lagu xiro waxa loo yaqaan 'elements hormones response' (HRE), iyo saamaynta dhaqdhaqaaqa transcriptional ee jaangooyooyinka qaarkood, oo soo saaraya saamaynta asaasiga ah.
Tijaabinta Root Testosterone Propionate Propulsion (57-85-2) Qeexitaannada
Product Name Tijaabinta qashinka Kobcinta Dufanka
Magaca Kiimikada Testosterone Root Testosterone Propionate Propionate;
Fasalka Daroogada ester stereo
Molecular Wsideed 344.495 g / mol
barafku Psaliid 244 ilaa 252 ° F (NTP, 1992)
milmi Biyaha 1.48 mg / L (at 25ºC)
Biological Life-Life taariikhda No
Color Caddaan cad ama huruud ah oo cadaan ah
ama budada cad ama kareem-cad ama kareem-cad
SOlubility wax ka yar 1 mg / mL at 76.1 ° F (NTP, 1992)
Application 1,3-Dimethylbutylamine waxaa loo isticmaalaa in lagu baro sida loo isticmaalo daaweynta polymethacrylate-ka ee loo yaqaan 'polymethacrylate reamin' oo ah marxalad taagan oo ku jirta shukulaatada dareeraha ah ee la socota UV.
Waa maxay baaritaanka tijaabada ah ee Raw-ku-oolka ah (57-85-2)?
Daawada kore ee testosterone propionate budada ayaa ah mid si tartiib ah u sii daaya steroid anabolic leh nolol yar oo gaaban. Astaamahani wuxuu u ogolaanayaa in uu isticmaalo in uu isticmaalo isbitaallada loo yaqaan 'testosterone propionate' ee toddobaadyada 8-10 iyada oo heerarka ugu sarreeya ee dhiigga ee heerarka ugu sarreeya lagu gaaro toddobaadyada 2-4. Waa xambaarsan tijaabo ah steroid steroid ee testosterone qaabka 17β propionate ester of testosterone. Badeeco tijaabo ah oo loo yaqaan 'testosterone propionate' waa badeecad aad u firfircoon. Testosterone waa steroid aad u awood badan, iyo hindisaha propionate wuxuu keenaa xaalad ah in diiradda dhiigga si wax ku ool ah loo xakameyn karo, iyo joojinta isticmaalka keeni doonaa hoos u deg deg ah ee diirada dhiigga ee user. Tani waa waxa ka dhigaya waxyaabaha soo jiidashada cayaaraha dumarka ah.
Sidee Baadhitaan Mucaawadeedka Qalabka Loo Qaadi Karo (57-85-2) shuqullada
Daawada Gene ayaa la bilaabay, taas oo ah dheellitirka nitrogen ee jirka ku bedelay si haboon. Qiyaasaha muruqyada koritaanka maskaxda ee koritaanka ayaa kordhiya beerka iyo murqaha. Dhiirrigelinta ayaa sidoo kale keena faafin dheellitir ah oo ka mid ah muruqyada, taas oo ay sabab u tahay dib u soo kabashada murqaha iyo hyperplasia. Marka habkaas, dhammaan qiimeeyaashu waxay leeyihiin qaab isku mid ah oo ficilka; Farqiga ugu weyni waa in diiradda la saaro hawlaha iyo ficiladooda.
Tijaabinta qashinka ah ee kaneecada (57-85-2)
Daawo caadi ah oo loogu talagalay daawada testosterone waa 50-100mg maalin kasta ama maalin kasta. Tani waxay bixisaa tiro toddobaadle ah oo ah 350mg-700mg. Tixgelinta waxaa badanaa la isticmaalaa inta lagu jiro jarista, oo ay weheliyaan steroids kale oo aan waxyeello lahayn sida winstrol ama primobolan. Waxa kale oo aad waxtar u leh isku-dhafka is-dhex-galka ah ee aan ku-ooleynin werogen sida trenbolone, taas oo keeneysa aragti adag oo la qeexay. Isugeynta steroids oo dheeraad ah oo loo yaqaan 'propionate' ayaa si cad u dhalin karta saameyno isdaba-joog ah oo isdabajoog ah.
Tijaabinta Root Testone Dufanka u samee (57-85-2) Faa'iidooyinka
Horumarinta testosterone propionate:
Wuxuu kordhiyaa murqaha iyo xoogga
Baruurta gubta, waxay kordhisaa ballaarinta
Waxay kordhisaa libido
Hoos u dhigista khatarta ku dhaca wadnaha ee ischemic iyo koronar
Faahfaahinta tijaabada ee testosterone waxay leedahay muddo gaaban. Tani waa aaladda ugu dhakhsaha badan testosterone. Sidaa darteed, cirbadaha waxaa badanaa la sameeyaa maalin ama maalin kasta. Dhab ahaan tani waa khasaarihii ugu muhiimsanaa marka la barbar dhigo qiimeeyaal kale oo dheer.
Dib-u-eegista 'testosterone propionate' ayaa muujinaya in ka dib markaad boogta ku dhejisid isla markaaba waxaad dareemi doontaa korriin xoog leh, waxay la xiriirtaa heerarka kor u kaca hormoonka jirka. Taasi waa, marka daroogada ay ka muuqato jirka, waxaa si dhakhso ah u nuugeysa dhiigga, sidaas darteed waxaa la dareemay ka dib markii cirbadkii koowaad. Tani waxay leedahay labadaba arjiga iyo macdanaha. Daawada dheeraadka ah waa isla markiiba ka dib markaad cirbad tahay waxaad dareemeysaa tamar aad u daran, iyo cadaanku waa xaqiiqda ah in daroogada si dhakhso ah loo nadiifiyo muddo gaaban. Waa inaad marar badan isku durto (maalin walba ama maalin kasta).
Dhamaan cayaartoyda daawada ma dareerayaan biyaha jirka (ama waa mid aad u yar), sidaa daraadeed daawadani (propionate) ma keeni doonto isbeddel degdeg ah oo ku yimaada tiro jirka ah sida (tusaale, 5-6 kg dhowr toddobaad) marka la barbardhigo qashinka kale. Si kastaba ha ahaatee, propionate testosterone keentaa in miisaan korodhsan inta lagu jiro koorsada propionate yihiin tayo sarre oo ka duwan kuwa kale. Waxaa sidoo kale jira khibrad iyo garasho.
Dhibaatooyinka kale ee saameynaya testosterone propionate marka la barbardhigo qiimeeyeyaasha kale waa in testosterone propionate iibsigu aad u qaali ah. Sababtoo ah daroogada waxaa loo isticmaali karaa sida qorista muruqyada, iyo sidoo kale inta lagu jiro gubashada dufanka xad-dhaafka ah, markaa ma aha mid caqli-gal ah in lagu daboolo miisaanka (maxaa yeelay waa qaali, iyo duritaanka waa in la sameeyaa maalin kasta, sidaas darteed ma ahan faa'iido miisaanka). Sidaa daraadeed, ciyaartoyda badankood waxay door bidaan daawooyinka kale ee la xidhiidha cufnaanta, waxayna ku talinayaan dufanka xad-dhaafka ah.
Soo iibso testosterone Daawada budada ah laga bilaabo Buyaas.com
Root 1-Testosterone (Dihydroboldenone) budada (65-06-5)
Kiimikada tijaabada ah ee qashinka ah (5949-44-0)